SCIENCE TO SOCIETY: सानो सानो खरायो आजभोलि कता हरायो?
त्यो खरायो देख्दा पक्कै पनि भोकायर बाहिर निस्केको हुनपर्छ भन्ने शशी सर र मेरो अनुमान थियो। अनि हाम्ले बेबी क्यारोट (साना साना गाजर्) २-४ वटा फाल्दिम उ तिर। खाइ हाल्छ कि भनेर। गोडा एक दुई त खायो होला। बिचार गरि गरि। यी मुला मान्छे ले के देका हुन के? खाइयो भन्ने मरिने पो हो की भन्ने सोच्यो होला। एउटा बेबी क्यारोट खाको घन्टौ कुरे पछि बल्ल अर्को खायो। हाम्ले गनी'राथिम कति वटा खान्छ भनेर। सायद् एउटा खाएर त्यसको असर हेरेको हुनु पर्छ। नराम्रो गर्‍यो भने नखाने नत्र अरु खाने। त्यो सानो खरायो कम्ता बाठो थे'न। हामी मान्छे ले मर्ने पो हो की भनेर तेल्ले खुब अनुसन्धान गर्यो। के भर भो'र दङाली केटाहरुको। मारेर भुट भाट पार्ने पो हुनकी भन्ने पिर थ्यो होला तेल्लाइ। हामले कुनै हानी नगर्ने ढुक्क भए पछि बल्ल खान सुरु गर्‍यो अनि अलि नजिक जादा पनि भागेन। त्यसको केही दिन पछि सम्म पनि आउँदै जादै गर्थ्यो। पछि देखिन छोड्यो। अहिले को कुटी तिर भने देख्दिन त्यस्तो खरायो सरायो। अस्ति एक दिन लोखर्के भने देख्य थे'। यता उता दौडिदै, उफ्रिदै थियो।
खरायोको कुरा गर्दा सानै छदा एक्पटक खरायो मार्न गा'को सम्झना हुन्छ। ५-६ कलास पढ्ने बेला तिर हुनु पर्छ। साथिहरु र तिन्का काका, बा हरु सिकारी थिय। गुलेली ले चरा मार्ने, खरायो (चौडा-थारु भाषामा)मार्नु सामान्य थियो। बन तिर जादा चौडा देखिरन्थिम्, चौडै नदेखे पनि उस्को बास स्थान, उस्को आची त कति देखिन्थ्यो कति। एक दिन राती चौडा मार्न जाने टोलिमा म पनि जाने मौका पा'थे। जाल थापेर मार्ने। उनिहरु के गर्थे भने राती चौदा बारिमा चना खान आउने बाटो पत्ता लगाउथे। अनी त्यो बाटो लाई हरियो स्यौला प्रयोग गरेर अलि परिवर्तन गरेर एक ठाउमा जाल थाप्ने। गौडा गौडामा ढुकेर बस्ने, अर्को टोली ले बारी तिर गएर चौडा लखेड्दै ल्याउने ताकी त्यो जाल तिर जावस्। राती २-३ बजे सम्म त्यसो गर्दा पनि त्यो दिन चौडालाई जालमा पार्न सक्केन र तेत्तिकै फर्किनु पर्यो। दिनै नै हुन्, आजभोलि घर अगाडी नै चौडा देखे पनि खानेकुरा दिन मन लग्ने।